सोल्टीको भूपू लाहुरे निर्माण हुने
Wednesday, 10.14.2015, 10:45pm (GMT6.5)
गायक तथा कमेडियन कलाकार गुरूङ सोल्टीले मायाप्रेमको मार्मिक कथामा आधारित नेपाली चलचित्र भू.पू. लाहुरे निर्माण गर्ने भएका छन् । सोल्टीकै कथा, पटकथा, संवाद, गीत, संगीत तथा निर्देशनमा तयार हुने चलचित्र कार्तिक ९ गतेबाट सुटिङ फ्लोरमा जादैछ ।
हङकङमा रहेकी सोल्टीकी आमा र्सार्जन्ट दिलकुमारी गुरूङको लगानीमा एन्.जी. (नेपाल गोर्खा) इन्टरटेनमेन्टले निर्माण गर्ने चलचित्रमा नुमाफुङ, निशानी लगायतका चर्चित नेपाली चलचित्रहरुमा सबल अभिनय गरिसकेका कलाकार प्रेम सुब्बा भूपू लाहुरेका रुपमा देखा पर्नेछन् । विशेषतः 'छुच्ची आईमाईकी' रुपमा पर्दामा देखिने नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भईरहेको चर्चित हाँस्य टेलिश्रृखला जिरे खुर्सानीमा भोक लाग्योको आमा बनिएर अभिनय गरिरहेकी सविता गुरूङ यो चलचित्रमा पनि छुच्चि आईमाईकै रुपमा देखा पर्ने, निर्देशक सोल्टीले जानकारी दिए । नयाँ कलाकारमा बुटवलकी योगिता गुरूङ तथा धरानका शिशिर राई, संगीता राई र बाल कलाकार यूनिका राई अडिसनबाट छनौट भएका छन् ।
चलचित्रमा सम्शेर गुरूङ प्रमुख सहायक निर्देशक, विष्णु बास्तौला मुख्य सहायक निर्देशक, दिव्य सुवेदी क्यामरा पर्सन, मणि लिम्बु नृत्य निर्देशक, सुमन शंकर मेकअप, विशप ताम्राकार फोटोग्राफी तथा रवीन सिमोरिया र शम्भु यादव प्रोड्क्शन कन्ट्रोलर छन् । चलचित्रको टाईटल ट्रयाक 'छाडेर गईन आमाले पनि...' र प्रोमोशनल गीत 'केही त भनिदेऊ...' चर्चित गायक राजेश पायल राईले गाएका छन् । 'खुशी...तिमीले पायौं, पाईनौं -' बोलको अर्को प्रोमशनल गीत भने प्रथम नेपाल आईडल विक्रम राईले गाएका छन् । चलचित्रमा एउटा आईटम गीत छ । अडिसन मार्फत गायिका छानिने सोल्टी बताए । आईटम गीत संजय हमाल र अरु सबै गीत विकास भूजेलले एरेन्ज गरेका हुन् । चलचित्रको ब्याक ग्राउण्ड स्कोर पनि भूजेल र उनका दाजु विनोद भूजेले गर्दैछन् । तिस लाख लगाणीमा निमार्ण हुने चलचित्र देशको वर्तमान परिस्थिति र समस्याका कारण बजेट बढ्न सक्ने आकलन निर्माण कम्पनीको छ । चलचित्रलाई धरान, चतरा, बराहक्षेत्र, भेडेटार, नाम्जे, डाडाँबजार, राजारानी, पोखरा, काठमाण्डौं लगायतका स्थानहरुमा छायांकन गरिने, सोल्टीले बताए ।
एक हजार डलर सहयोग: यसैविच, किराँत राई यायोक्खा, हङकङले हङकङमा नै निर्माण गरिरहेको चुला घरलाई चलचित्र भू.पू. लाहुरेको तर्फबाट प्रस्तोता गुरूङ सोल्टीले हङकङ डलर एक हजार सहयोगको घोषणा गरेका छन् । हङकङमा नै रहेका किरात राई समुदाय, विभिन्न कलाकार लगायतले चुलो घरमा चासो दिएर सहयोग गरिरहेका छन् ।